Ninkii ugu guska weynaa caalamka oo guursaday Gabadhii ugu miskaha yareed caalamka =dhibaato taagan - iftineducation.com
Ninkii ugu guska weynaa caalamka oo guursaday Gabadhii ugu miskaha yareed caalamka =dhibaato taagan
iftineducation.com – Ninkan ayaa dhibaato weyn ku qaba weynaanta xubintiisan
waxa uuna nacay naftiisa waxaad arkaysa iga oo qamri cabaya oo qeylinaya iyo dad gurigiisa
usoo kal dhuumanaya si ay sawir uga qaataan.
Ninkan marka uu magaalada marayo waxaeegaya dadka oo dhan saaxiibadiisana way ku
ciyaarayaan oo waxa ay la yaaban yihiin dhibka
haysta saaxiib kood.
Si kasta waa uu isku dayay xataa mar waanduraya ayuu yiri balse wali wuu yaraan la yahay
waxa uuna le’ eg yahay jilbihiisa oo waxa oo qeyb ka yahay lugihiis.
Naagaha ayaad arkaysaa inay aad uga sheekaystaan marka ay isla joogaan kaligood guska weyn,iyo sida uu u qancin karo haweenka.
Xubinta taranka ragga sida la ogyahay waa mid ahmiyad gaar uleh ragga waana qeyb kamid ah muujintiisa raganimo, waana xubnaha jirkiisa kuwa ugu mihiimsan, hasa ahaatee dunidaan aan ku nool nahay raga kama sina dhanka xubinta taranka, wadamada ayaa hogaamiya liiska xubinta taranka raga.
Hadaba shabakada iftineducation.com waxay idiin soo gudbin doontaa daraasad lagu soo daabacay jurnal Personality and Individual Differences taas oo ku soo bandhigtay sida ragga aduunyada ku nool ay ukala aalad wayn yihiin,Daraasada ayaa sheegtay in ragga dunida ugu xibinta taranka wayn ay ku nool yihiin qaarada Africa gaar ahaan wadanka koongo sida ay aduunyada ugu kala haroosa dhanka kaalimaha xubinta taranka raga ayaa ah sidatan:
nimanka ugu guska weyn inta badan ma dhaafo – 7.1 inches kuwa ugu yar wuxuu noqon karaa 3.8 i inches iyo wax ka sii yar.